Ku-Simihii Taliyaha Nabad-sugidda Afgooye Oo La Khaarajiyey + Al-Shabaab Oo Sheegatay - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » Ku-Simihii Taliyaha Nabad-sugidda Afgooye Oo La Khaarajiyey + Al-Shabaab Oo Sheegatay
Ku-Simihii Taliyaha Nabad-sugidda Afgooye Oo La Khaarajiyey + Al-Shabaab Oo Sheegatay
Wararka ka imanaya magaalada Afgooye oo 30KM u jirta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ku waramaya in halkaas lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sarkaalkan oo Rag ka tirsan Xarakada Al-Shabaab khaarajiyeen ayaa lagu sheegay magaciisa Korneel Guudle Maxamed Nuur, waxaanu ahaa ku-simaha Taliyaha Ciidanka Nabad-sugidda magaalada Afgooye.
Dirawalkii Korneelka ayaa sidoo kale lagu khaarajiyey weerarkan, waxaanay raggii dilkaasi geystay ay goobtii ka kaxaysteen Baabuurkii Korneelka oo noociisu ahaa NOAH, iyo weliba Qorigiisii oo ay qaateen.
Wararku waxay intaasi ku darayaan Korneelka markii la dilay kadib in waxaa laga qaatay gaari nooca raaxada ah ee loo yaqaano NOHA iyo qori uu watay.
“Hawl-gal ay ciidamada Mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayada Shabeelaha Hoose waxay ku dileen sarkaal darajadiisa ciidan aheyd Korneel oo ahaa ku simihii waxa loogu yeero Nabad-sugidda Murtadiinta degmada Afgooye gaari iyo hubna waa ka Qaniimeysteen, Alle ayaa ku mahadsan” ayaa lagu yidhi war kasoo baxay Al-Shabaab oo lagu faafiyey baraha Internetka qaarkood.
Dilkan ayaa kusoo aadaya xilli sidoo kale ay wararku tibaaxayaan in ciidamada Al-Shabaab ay dileen Askari ka tirsan maamulka Puntland kadib weerar qorsheysan oo ay ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug.